ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > Josepf Tkach ၏ > ဧဝံဂေလိတရားကိုကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်
the ၀ ံဂေလိတရားသည်သတင်းကောင်းကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်သိသည်။ ဒါကိုသတင်းကောင်းလို့ခင်ဗျားတကယ်စဉ်းစားသလား။
သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောကဲ့သို့ငါအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့ငါဆုံးမhaveဝါဒပေးပြီ "ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ" ၌အသကျရှငျ ဤအရာသည်အရာရာကိုရှုထောင့်မှကြည့်ပြီးကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အတိုင်း“ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း” ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အားထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ငါ“ အညီပြုမူ” မယ်ဆိုရင်ကြီးစွာသောဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာကဒီဟာကငါ့ရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမမှီတော့ဘူး။ သို့သော်တစ်စုံတစ်ခုကိုဤမျှကာလပတ်လုံးယုံကြည့်ပြီးနောက်၎င်းကိုလုံးဝဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်။ ဤသို့သောကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်၊ သို့မှသာ“ နောက်ဆုံးသောကာလ” ဖြစ်ရပ်များကိုအထူးအနက်ဖွင့်မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုမြင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလကိုကြိုတင်ဟောကြားချက်များကိုလူအများအား "အပေါကက္ကလာ" ဟုရည်ညွှန်းသည်ကိုကြားခဲ့ရသည်။
သို့သော်လက်တွေ့တွင်၊ ဤသည်မှာရယ်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဒီလိုအမြင်မျိုးဟာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်လူတို့သည်အရာအားလုံးကိုရောင်းချရန်၊ ဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ရန်နှင့်ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လူများကိုသွေးဆောင်နိုင်သည်။
ငါတို့အများစုဟာဒီလောက်ဝေးဝေးမသွားဘူး။ သို့သော်မကြာမီအနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝနိဂုံးချုပ်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်ယုံကြည်မှုသည်လူတို့အား၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာများကို“ ချွတ်ပစ်” စေပြီး“ အဘယျသို့လာပါသနည်း” ဟုထင်စေနိုင်သည်။ သူတို့ဝန်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုအကောင်းမြင်စွာကြည့်ကြသည်။ အရာရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်သောသင်တန်းသားများထက်ပရိသတ်နှင့်အဆင်ပြေသောတရားသူကြီးများဖြစ်လာသည်။ အချို့သော“ ပရောဖက်ပြုချက်စွဲသူများ” သည်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်ငြင်းဆန်ခြင်းအထိပင်ဝေးရာသို့သွားကြသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်နောက်ဆုံးကာလကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများကမူသူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးကိုလျစ်လျူရှုကြသည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏ဘဏ္ancesာရေးကိုစိုးရိမ်သည်၊ သူတို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိပါကသူတို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိသည်။
ဤသည်မှာယေရှုခရစ်နောက်လိုက်ရန်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ငါတို့ကိုဤလောက၌အလင်းရှိစေဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်မှာခရစ်ယာန်များမှမီးခွက်အချို့သည်ရဲများကရဲများကိုရဟတ်ယာဉ်များအနီးတ ၀ ိုက်တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဤလောကကိုကျွန်ုပ်တို့ဝန်းကျင်ရှိလူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်ဟူသောသဘောဖြင့်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားအလင်းရောင်ဖြစ်စေလိုသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်ပူဇော်ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ” အစား“ ပထမနေ့ရက်များ” တွင်အသက်ရှင်နေသည်ဟုမယုံကြည့်ပါနှင့်။
Jesus hat uns nicht den Auftrag gegeben, Untergang und Finsternis zu verkünden. Er gab uns eine Botschaft der Hoffnung. Er trug uns auf, der Welt mitzuteilen, dass das Leben erst beginnt, statt sie „abzuschreiben“. Das Evangelium dreht sich um ihn, wer er ist, was er tat und was auf Grund dessen möglich ist. Als Jesu sich aus seinem Grab losriss, änderte sich alles. Er machte alle Dinge neu. In ihm hat Gott alles im Himmel und auf Erden erlöst und versöhnt (Kolosser 1,16-17) ။
ယေရှုသည်သေခြင်းမှထမြောက်သောအခါလူအားလုံးသိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည်လူများအားသိစေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ "လက်ရှိဆိုးယုတ်သောလောက" မပြီးမချင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အတိုက်အခံနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ငါတို့မူကား၊ ရှေ့တွင်ရှိသောထာဝရကာလကိုကြည့်။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကြာခရစ်ယာန်ဘာသာသည်မျက်စိတစ်မှိတ်မျှသာဖြစ်သည်။
အခြေအနေကအန္တရာယ်ရှိလာတိုင်းလူတွေကသူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအန္တရာယ်များသည်နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကြာသွားပြီးနောက်ဆုံးကာလတွင်သူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်ကိုသေချာစွာသိထားသောခရစ်ယာန်အားလုံးသည်မှားယွင်းစွာမှားခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကမှန်တယ်ဆိုတာသေချာတဲ့မီးကိုမပေးခဲ့ဘူး။
ဤအချက်သည်အကောင်းမြင်ခြင်း၊ အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။ မင်းလည်းမြင်တာပေါ့